‘मातृभूमि छोडेर विदेश हिँड्ने, अनि हामीलाई राष्ट्रभक्ति सिकाउने ? बाहिर बसेर राजनीति नगर’| Corporate Nepal
च) २९१७ को सम्झौता संसदबाट पारित नभई, किन २०१९ को सम्झौता गरेको ? जब परियोजना लागू नै भइसक्यो तब, संसदले पारित किन गर्नुपर्ने ? किनकी तेसो गरेपछि, सम्झौतामा लेखिएको अमेरिकी विदेश सहायता ऐन नेपाल कानुनभन्दा माथि हुन्छ । होइन ? त्यसो भएपछि त हामीले ताइवान र तिब्बत एबं कास्मिरी जेहादीलाई पनि स्वतन्त्रताकर्मी कै रुपमा मान्नु पर्ने हुन्छ नि होइन ?
मित्रहरु तपाईंहरुले एउटा काम गरिदिनुहोस् । नेपाललाई उचालेर अमेरिका छेउमा लान सक्ने केही मेसिन छ भने पठाइदिनुहोस् । नेपाललाई त्यता लाँदा तपाइंहरुलाई पनि नजिक हुने, हामीले पनि भारत र चीनको झन्जट बेहोर्नु नपर्ने । यदि उता कुनै ल्याटिन अमेरिकी देशसँग साट्न मिक्छ नेपाल भने तेसो गर्दिए पनि हुन्छ। होइन भने नेपालप्रति अलिकता पनि प्रेम छ भने छिमेकी कि बक्रताको भुमरीमा हाल्न दबाब नदिनुहोस् । हाम्रा छोराछोरीले माटो खनेर बाँच्नुपर्छ। कित हामी सबैलाई उतै लगिदिनु होस्। होइन भने आफ्नो गरेर खानु होस् । कहिले कहिले आउनुहोस् । तर त्यहाँ बसेर नेपालको राजनीति नगर्नुहोस् ।